Khatar Caafimaad: Iska Ilaaliya Kiishashka Yaryar Ee Caleenta Shaaha! – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA Khatar Caafimaad: Iska Ilaaliya Kiishashka Yaryar Ee Caleenta Shaaha!
Khatar Caafimaad: Iska Ilaaliya Kiishashka Yaryar Ee Caleenta Shaaha!
Khubarada caafimaadku waxay ku talinayaan in la iska joojiyo isticmaala caleenta shaaha sijillan ee sidii libtoonka oo kale u dahaadhan, maadaama shaahaan aanuu u wanaagsaneyn dhibaato caafimaadna uu leeyahay.
Kiishashka yaryar ee caleenta shaahu ku jirto, waxa ku dhex jira maaddooyin caafimaadka waxyeelleeya, tusaale ahaan; si kiishka uu u adkaado heerkulka sarsarena uu ula qabsado waxaa laga soo buuxiyaa maadada Resin oo ah maaddo kiimiko dabiici ah oo laga helo geedka “Pine” ah oo ku milantaa acetone iyo alkolada.
Sidaas oo kale waxaa adag in la ogaado nooca kiishashkaa yaryar ee caleenta shaaha lagu soo shubo, waxaa gudihiisa laga heli karaa warqado shaah iyo milan kale iyo boodh ka mid yahay, si caleenta uu dhadhankiidu u wanaagsanaado waxaa lagu soo daraa maaddooyin gaar ah oo dhadhanka wanaajiya.
Inta badan kiishashkaa yar yar marka aad biyo qabow dhex dhigto waxaa kuu caddaaneysa midabkiisa waxaana kuu caddaaneysa in uu ku jiro maaddooyin midab ah oo si taban oo aan wanaagsaneyn u saameynaya beerka. Khubarada qaar waxay leeyihiin madaadaasi waxay keentaa kansar iyo madhaleysnimada.
Khubaradu waxay ku talinayaan: in caleenta shaaha wanaagsan la iska eego, waxaa lagu gartaa in uu xuub khafiif ah uu ku sameeyo dusha sare marka la diyaarinayo, halka shaaha raaggay uu koobka reed adag ku reebo.
La wadaag saaxiibaddaa (Share).
Previous articleWasiirka arrimaha Dibadda Eritrea oo Yimid Somaliland
Next articleCiidamada Kenya Oo Isaga Baxay Deegaano Iyo Al-Shabaab Oo La Wareegay
Lammaanaha Ugu Cimriga Dheer Qoysaska Adduunka & Muddada Ay Wada Noolaayeen...
4 Dhaqan Oo Nafta Geliya Farxad Ka Badan Farxadda Ay Ka...